ExitCoin စျေး - အွန်လိုင်း EXIT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို ExitCoin (EXIT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ ExitCoin (EXIT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ ExitCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ ExitCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
ExitCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
ExitCoinEXIT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000003ExitCoinEXIT သို့ ယူရိုEUR€0.000002ExitCoinEXIT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000002ExitCoinEXIT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000002ExitCoinEXIT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00002ExitCoinEXIT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00002ExitCoinEXIT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.00006ExitCoinEXIT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00001ExitCoinEXIT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000003ExitCoinEXIT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000004ExitCoinEXIT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.00006ExitCoinEXIT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00002ExitCoinEXIT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00001ExitCoinEXIT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.000191ExitCoinEXIT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.000429ExitCoinEXIT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.000003ExitCoinEXIT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.000004ExitCoinEXIT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.00008ExitCoinEXIT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00002ExitCoinEXIT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.000273ExitCoinEXIT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.00302ExitCoinEXIT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.000978ExitCoinEXIT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.000188ExitCoinEXIT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.00007
ExitCoinEXIT သို့ BitcoinBTC0.0000000002 ExitCoinEXIT သို့ EthereumETH0.000000007 ExitCoinEXIT သို့ LitecoinLTC0.00000005 ExitCoinEXIT သို့ DigitalCashDASH0.00000003 ExitCoinEXIT သို့ MoneroXMR0.00000003 ExitCoinEXIT သို့ NxtNXT0.000199 ExitCoinEXIT သို့ Ethereum ClassicETC0.0000004 ExitCoinEXIT သို့ DogecoinDOGE0.000736 ExitCoinEXIT သို့ ZCashZEC0.00000003 ExitCoinEXIT သို့ BitsharesBTS0.00008 ExitCoinEXIT သို့ DigiByteDGB0.00008 ExitCoinEXIT သို့ RippleXRP0.000009 ExitCoinEXIT သို့ BitcoinDarkBTCD0.00000009 ExitCoinEXIT သို့ PeerCoinPPC0.000008 ExitCoinEXIT သို့ CraigsCoinCRAIG0.00116 ExitCoinEXIT သို့ BitstakeXBS0.000109 ExitCoinEXIT သို့ PayCoinXPY0.00004 ExitCoinEXIT သို့ ProsperCoinPRC0.00032 ExitCoinEXIT သို့ YbCoinYBC0.000000001 ExitCoinEXIT သို့ DarkKushDANK0.000818 ExitCoinEXIT သို့ GiveCoinGIVE0.00552 ExitCoinEXIT သို့ KoboCoinKOBO0.000581 ExitCoinEXIT သို့ DarkTokenDT0.000002 ExitCoinEXIT သို့ CETUS CoinCETI0.00737
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 12 Aug 2020 23:35:02 +0000.